तपाईंको आजको राशिफल/वि.सं. २०७५ साल असार २० गते, बुधबार। | Ekhabar Nepal
धार्मिक असार २० २०७५ ekhabarnepal
वि.सं. २०७५ साल असार २० गते। बुधबार। इश्वी सन् २०१८ जुलाई ४ तारिख। नेपाल संवत् ११३८ तछलागा। आषाढ कृष्णपक्ष। तिथि– षष्ठी,
विभिन्न भौतिक साधन जुट्नेछन् भने दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्ने समय छ।आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन्। काम र व्यवसायबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ। श्रमको उचित मूल्यांकन हुनाले आय बढ्नुका साथै उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुनेछ। प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। साँझतिर अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई सहज बनाउन आफन्तबाट टाढिनुपर्ने हुन सक्छ।
विशिष्ट व्यक्तिहरूसँगको भेटघाटले उत्साह जगाउनेछ।प्रयत्न गर्दा सजिलै लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ। पुरुषार्थद्वारा दिगो काममा जग बसाउने मौका छ। मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम दिलाउन सक्छ। सामाजिक दायित्व बढ्नेछ। व्यापारमा पनि प्रशस्त फाइदा हुनेछ। साथीभाइको सहयोगले हिम्मत दिलाउनेछ। साँझतिर भने सञ्चित रकम खर्चनुपर्ने हुन सक्छ।
अध्यात्मभाव जागृत हुनुका साथै धर्मकर्म र परोपकारी काममा प्रवृत्त भइनेछ। परिस्थितिवश आँटेको काममा विलम्ब हुनेछ। सहयोगको नाममा झुक्याउनेहरूले दु:ख दिनेछन्। अस्वस्थताका बाबजुद कामको जिम्मेवारी बढ्नेछ। तापनि प्रयत्न गर्दा फाइदाका स्रोत पहिचान गर्न सकिनेछ। साँझदेखि स्थितिमा सुधार आउनाले पदीय जिम्मेवारी प्राप्त हुने सम्भावना छ।
अप्ठ्यारो परिस्थितिमा काम रोकिन सक्छ। परिस्थितिवश चिताएको काम रोकिन सक्छ। सानोतिनो समस्याले अल्झाउन सक्छ। स्वास्थ्यका लागि आहारविहारमा सजग रहनुपर्नेछ। अध्ययनमा बाधा पुग्नेछ भने अरूका लागि बुद्धि खर्चनुपर्ला। ठूलो फाइदा नदेखिएकाले लाभ उठाउन हतार नगर्नुहोला। साँझदेखि स्थितिमा सुधार आउनाले जिम्मेवारी हातलागी हुनेछ।
रमाइलो यात्रा गर्ने अवसर जुट्नेछ।सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा निखारता आउनेछ। उपहारले उत्साह जगाउनेछ। मित्रता र प्रेमको बन्धन कसिनेछ भने अतिथिको रूपमा सत्कार प्राप्त हुने समय छ। तर मनोरञ्जन तथा लोकाचारका लागि फजुल खर्च हुन सक्छ। साँझतिर स्वास्थ्य प्रतिकूल रहनेछ। केही समस्या बढ्नाले सोचेजस्तो उपलब्धि प्राप्त नहुन सक्छ।
आम्दानी बढाउने काम सुरु गर्न सकिनेछ।विभिन्न भौतिक साधन जुट्नाले दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौका छ। चुनौती पन्छाएर काम बनाउन सकिनेछ। शत्रु र रोगबाट छुटकारा मिल्नेछ। आँटेका काममा प्रतिपक्षीहरू समेत सहयोगी बन्नेछन्। साँझदेखि यात्रा गर्ने अवसर जुट्नुका साथै अतिथिका रूपमा सम्मान पाइनेछ। गृहस्थी यात्रा रमाइलो रहनेछ।
कामकाे चाप बढ्नेछ भने स्वास्थ्यले त्यति साथ नदिने समय छ। व्याहारिक समस्याले याेजना रोकिन सक्छ। मिहिनेतकाे नतिजा चित्तबुझ्दाे नअाउन सक्छ। तापनि लगनशीलताले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। साँझदेखि चुनौती चिर्दै काम बनाउन सकिनेछ। द्वेष तथा ईर्ष्या गर्नेहरूले हार खानेछन्। स्वास्थ्य सबल रहनेछ भने पराक्रमद्वारा गुमेको अधिकार स्थापित गर्न सकिनेछ।
साझेदारीमा देखिने समस्याले पहिलेको सम्झौता भंग हुन सक्छ। पारिवारिक असमझदारीले काममा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। बेसुरमा काम गर्ने बानीले मेहनत खेर जानेछ। ज्ञानको प्रचुरताले पनि काममा समस्या पर्न सक्छ। अरूको व्यवहारले शंका उब्जाए पनि मान्यजनको सुझाव शिरोधार्य गर्दा फाइदा हुनेछ। दिगो योजनामा अघि बढ्दा साँझदेखि लाभ मिल्नेछ।
विभिन्न अवसर प्राप्त हुनेछन् तर काम पूरा गर्न समस्या पर्नेछ।आत्तिने बानीले बोलीको गलत अर्थ लाग्न सक्छ। हिसाब नमिल्नाले विवाद आउन सक्छ। परिबन्धले समस्या निम्त्याउने हुँदा आफ्ना योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नुहोला। आलोचकहरूलाई व्यवहारले समेट्ने प्रयास गर्नुहोला। शुभचिन्तकहरूको साथ भने पाइनेछ। संकल्प पूरा गर्न लगनशील बन्नुपर्नेछ।
विशेष अवसरका साथ केही चुनौती पनि देखा पर्नेछन्।खानपानको सोखले स्वास्थ्य प्रतिकूल बन्न सक्छ। तर प्रयत्न गर्दा भैपरी आउने समस्या समाधान हुनेछन्। रमाइलो जमघटको आनन्द प्राप्त हुनेछ। पहिलेको सफलताले हौसला जगाउनेछ। हल्लाको पछि लाग्दा दु:ख पाइनेछ। प्रतीक्षित नतिजा उत्साहप्रद नहुन सक्छ। साँझदेखि अरूको भरपर्दा काम बिग्रन सक्छ।
नयाँ काम थाल्न केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ।व्यवसायमा लागत बढ्नेछ भने अनियन्त्रित खर्चले मन पिरोलिन सक्छ। पछिको फाइदाका लागि केही त्याग गर्नुपर्ला। बेसुरमा काम गर्ने बानीले चुनौती निम्त्याए पनि लगानी बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आउन सक्छ। साँझतिर पारिवारिक जमघटले आनन्दित भइनेछ। तर, विवादास्पद जिम्मेवारी भने सम्हाल्नुपर्ला ।